Qatarta ay Leedahay Nafaqada Beeraha Lagu Bacrimiyo |Tukesomalism.com | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan, April 4, 2019
Ganacsiga & TeknolojiyadaHorumarka & Deegaanka
Sahal Issaakh — May 23, 2016
Beeraleeyda Soomaaliyeed ayaa waxay bilaabeen in ay isticmaalaan Nafaqooyinka laga sameeyay kiimikada ee lagu bacrimiyo beeraha si ay u xoojiyaan wax soo saarka beerahooda balse waxaa isweydiin mudan in ay beeralydu taqaan sida loo istcmaalo nafaqadaan. Nafaqadu waxaa ay ka koobantahay labo nooc oo kala ah Acidic Fertilizer iyo Basic Fertilizer, labadaan nooc waxaa looga sameeyay ayaa waxay tahay in caradu ka kooban tahay labadaan qeybood. Haddaba markaad dooneyso in aan isticmaasho nafaqooyinkaan waxaa lagaaga baahanyahay in aad ogaato nooca ay tahay carada beertaada si ay qasaaro ugu geysan beerta iyo dalaguba.
Waxaa ay leeyihiin nafaqooyinkaan wax loo yaqaan scorching effects oo waxa ay gubaan dhirta. Waxaa kaloo muhiim ah in aad aqoon u leedahay cadadka looga baahanyahay in loo isticmaalo halkii hectare ee beertaada si aysan ugu badan amaba ugu yaraan. Maadaama ay beeraleyda wadankeena yihiin dad aan aqoon durugsan lahayn ayaa waxaa soo korotay qatarta loogu jiro dhibaatooyinka ay keeni karaan nafaqooyinkaan.
Hay’adaha ka hawlgala dalka Soomaaliya ayaa ah kuwa qeybiyo nafaqooyin kala duwan ayagoon siin beeraleyda aqoontii lagu isticmaali lahaa. Nafaqooyinkaan waxaa la ogaaday in aysan carada oo kaliya wax u dhimin balse ay wax u dhinto noolaha sida cayayaanada ku jiro carada kuwaasoo muhiim u ah wax yaabo badan sida Aeration ka (Hawo siin), Decomposition (Qurmin) iyo qeybo kaloo badan, waxaa kale oo ay wax yeeleysaa dadka markii uu roob da’o waxaa soo qaado nafaqadii beerta lagu shubay biyaha daadka kadibna waxay ku daraan wabiyada iyo haraha ay dadka ka cabaan, halkaas ayaana dadku sunta ku cabi karaan.
Haddaba waxaad ogaataan in uusan dhulkeena u baahneyn wax nafaqo ah waayo ma jirto cid aad u tabcatay oo wali waa bakro, nafaqaduna waxaa loogu tala galay dhulka nabaad guuray ee damac beelay.
Next post Waa Maxay Maamulka Qeyraadka Aadanaha? |Tukesomalism.com
Previous post Qiimeynta Nolosha Guurka Iyo Qoyska |Tukesomalism.com